Fiantsoana any Madagasikara lasa lafo be? | Hery - Tsiky dia ampy |
Ny manarakaraka azy izay azonao andramana ihany koa dia ny voipstunt. Efa somary lafo sahady ary somary tsy dia mazava ny feo indraindray. Taloha dia izy ity no mora sy fampiasako fa amin'izao dia lasa lafo noho ny Rebtel. Tafakatra 0,43 Eur/min koa ny Voipstunt amin'izao raha 0,29 Eur/min taloha.
Ny google koa dia manana ny fitaovana fiantsoana numero telephone. Nisondrotra koa izy ito taty aoriana nefa mba mora ihany teo aloha. Amin'izao dia 0,49 Eur/min ny saram-piantsoana. Tsy mety koa izany ny Google raha hiantsoana finday fa ny mahatsara azy dia ny Hangout, izay tsy tahaka ny skype fa afaka miresaka miaraka amin'ny sary (videoconférence) amin'ny olona maro. Ny skype mantsy tsy faka manao video conférence.
4. Viber Out
Anisan'ny soavaly vao amin'ny sehatry ny fifandraisana ny Viber nefa efa be mpampiasa be. Nanararaotra nampiditra ny Viber Out koa ry zareo izay fomba hahafahana miantso laharana antso an-taroby tsotra. Mbola lafo anefa ny sarany, indrindra ho an'i Madagasikara satria dia mahatratra 0,84 Eur/min be izao izany. Ny ampiasaiko ny viber aloha hatramin'izao dia ny fifandraisana samy viber na antso izany na hafatra.
Ary ny tena lafo indrindra dia ny skype... izay efa voalaza fa nisondrotra ho 0,93 Eur/min be izao. Koa dia tsy hampiasaina hiantsoana finday any Madagasikara intsony indray aloha izany izao ny skype. Ny tombony ho an'i skype kosa anefa dia 0,06 Eur ny azy ny SMS mandeha any Madagasikara izay hitako mora indrindra raha mitaha amin'ny rehetra
Samy manana ny paosiny ny tsirairay ary samy manana ny manavanana azy fa amin'izao aloha dia resy lahatra aho hoe ny rebtel indray no hampiasaina. Raha mahita moramora noho io ianareo dia ilazao ihany.